Home Wararka Gudaha Muxuu yahay qorshaha Madaxweyne Xasan, kadib safarkiisa Baydhabo?
Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku wajahan magaalada Baydhabo, halkaas oo haatan laga dareemayo qaban qaabo loogu jiro soo dhoweyntiisa.
Baydhabo ayaa waxaa sidoo kale ku sugan wafdi uu horkacayo agaasimaha guud ee Madaxtooyada, ayna qayb ka yihiin xildhibaano, kuwaas oo hordhac u ah Madaxweynaha.
Xasan Sheekh Maxamed oo mar labaad loo doortay Madaxweynaha dowladda federaalka, kadib doorashadii 15-kii May ayaa safarkan wuxuu noqonayaa kiisii ugu horreeyey ee uu ku gaaro Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamul goboleeyada ka jira dalka.
Sidoo kale waxaa la filayaa Madaxweynaha inuu wada-hadallo la yeesho Cabdicasiis Lafta Gareen, kadibna uu xarigga ka jaro dhismaha cusub ee Madaxtooyada Koonfur Galbeed.
Haddaba Muxuu yahay qorshaha Madaxweyne Xasan, kadib safarkiisa Baydhabo?
Sida ay ogaatay Caasimada Online Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa booqashadiisa Baydhabo, kadib u gudbi doono magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug, halkaas oo uu kulamo kula yeelan doono Madaxweyne Axmed Qoor Qoor.
Qaban qaabo ku aadan safarka Madaxweynaha ee Dhuusamareeb ayaa haatan laga dareemayaa gudaha magaaladaas, iyada oo aad loo adkeeyey ammaanka.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in ciidamo dheeraad ah la dhigay magaalada, gaar ahaan kuwa Gorgor oo bilaabay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ee deeganka.
Xog badan lagama helin ujeedka safarka Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, balse waxay booqashadiisa u muuqataaa mid uu diirada ku saarayo maamulladii taabacsanaa Maxamed Farmaajo, ka hor dhismaha dowladdiisa cusub.
Previous articleSawirro: Koonfur Galbeed oo dhisatay madaxtooyada quruxdeeda lala cajabay
Next articleDAAWO:-Gudoomiye Cali Jeyte oo maanta dib ugu laabtay magaalada Beledweyne kaddib Dalxiis oo muddo bil ku dhow ugu maqnaa magaalada Muqdisho,